Huawei dia mitombo hatrany, mitentina 46% bebe kokoa amin'ny 2016 | Vaovao momba ny gadget
Huawei dia mitombo hatrany, mitentina 42% bebe kokoa amin'ny 2016
Ny mpamokatra sinoa dia tsy mamela olona tsy miraika, ary i Huawei dia amin'ny taonan'ny volamena. Na eo aza ny eritreritry ny maro, Huawei dia tsy natokana ho an'ny fanamboarana fitaovana finday fotsiny, izy io dia iray amin'ireo orinasam-pifandraisan-davitra lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, ity sy ny kalitaon'ny fanamboarana ny fitaovany no nahatonga azy hanana laza mampalaza ity marika ity mpitarika tsena tsy misy fisalasalana ary mampihorohoro ireo mpiara-miasa Aziatika toa an'i Samsung sy LG, izay mahita azy ireo akaiky sy akaiky ary tsy misy fikasana kely akory hijanona. Huawei dia mitombo hatrany amin'ny taona fahadimy nifandimby, nahazo fihenam-bidy nandritra ity taona 2016 ity.
21% ny tsena sinoa amin'ny fitaovana finday dia efa an'ny Huawei. Ny orinasa dia miomana handray dingana tsara mandritra ity 2017 ity nefa tsy manadino ireo fahombiazana azo tamin'ny 2016, ary izany no izy ny orinasa dia naka vola 24.343 42 tapitrisa, XNUMX% mihoatra ny tamin'ny taon-dasa. Ao amin'ny tsena iray izay toa tsy mitombina, ary amin'ny ankapobeny, ny tsena finday manerantany dia nitombo 0,6% fotsiny, mifanohitra amin'ny 29% ny fitomboana tanteraka izay azon'i Huawei ary izany dia manangona ireo mason'ny andiana kalitao kalitao. .
Na eo aza ny toe-tsena henjana, ny Huawei Consumer Business Group dia mitombo hatrany amin'ny hafainganam-pandehan'ny indostria - Richard Yu, solontena an'ny Huawei Consumer
Any Espana, ny maodely P8 Lite no Huawei be mpividy indrindra, miaraka amin'ny 7,4% ny varotra totalin'ny orinasa ao amin'ny faritany Iberia. Mandritra izany fotoana izany, manohy mampiasa vola amin'ny fitaovana amin'ny sehatra rehetra izy ireo, miaraka amin'ny fahombiazan'ny fananganana sy ny fahombiazana izay mampihorohoro ireo zazalahy lehibe fa tsy mangatsiaka.
Ary izao no fahitantsika ny orinasa iray izay nanao asa tsara nandritra ny taona maro nitombo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Huawei dia mitombo hatrany, mitentina 42% bebe kokoa amin'ny 2016
Samsung dia mandefa ny fampiharana ao amin'ny App Store hahafahana mitantana Gear S2, Gear S3 ary Gear Fit avy amin'ny iPhone
Ny PlayStation 4 no fanomezana ny fampielezana ny Noely